Izimvo kunye nesicwangciso sokubeka. | Iindaba zeGajethi
Izimvo kunye nesicwangciso sokubeka.
Ngaba ukhe wema wacinga lonto ngalo lonke ixesha umntu eshiya uluvo kwibhlog yakho, kunokuba kukungalingani kwisicwangciso sakho sokubekwa? Ewe, yile nto bendiyicinga emva kokufunda Ungalonyusa njani inani lamagqabaza Kwaye yile impendulo yam.
Muninzi lweebhlog ziya kumgama omde ukwandisa umsebenzi ojikeleze ibhlog yazo kunye enye yezona zinto zixhalabisayo kukufumana iindwendwe zakho ukuba zishiye amagqabantshintshi amaxesha ngamaxesha. Iya isanda ngokwanda into yokubona ukuba zingaphi iibhlog ezifakela iiplagi ukukhuthaza ukuthatha inxaxheba, umzekelo, nge-plugin ebonisa abaphawuli abasebenzayo.
TWonke umntu onomdla wokundwendwela uya kuba echithe iiyure ezingaphantsi okanye ezingaphantsi efunda iiblogi malunga nokusebenza kweinjini yokukhangela ndicinga ukuba akukho mntu uya kothuka xa ndibaxelela ukuba Ukuxinana kwegama eliphambili Yinto ebalulekileyo xa kuziwa ekubekeni inqaku. Kakhulu kum, i Ukuxinana kwegama eliphambili kunye nesihloko esikhethiweyo kwiposti nganye abayiyo ezona zinto zibalulekileyo zibalulekileyo ukuthathela ingqalelo ukwenziwa komsebenzi kwiphepha (Oko kukuthi, izinto esinokuzilawula ngokuthe ngqo kwiphepha lethu ngaphandle kongenelelo lwangaphandle).
A xa ndisenza iposti ndicinga ngayo kubhekiswa kubani kwaye kuxhomekeke kulo msebenzi Isicwangciso esinye okanye esinye. Ukuba inqaku elichaphazelekayo lenzelwe ukuba lifundwe ngu blogger Ke eyona nto iphambili ekufuneka ndiyenzile kukuba eli nqaku linayo amagama achanekileyo kwaye ahambisa umbono okanye umxholo Oko kunokuba nomdla kolu hlobo lokufunda, oya kuthi njengomthetho afike ngereferensi hayi ngenjini yokukhangela. Ngoku, ukuba iposti ijolise kwi Abaphulaphuli abaza kuthunyelwa nguGoogle emva koko izinto ziyatshintsha kwaye eyona nto iphambili iphambili yile yandisa umxholo wenqaku ukuyenza ibe nomtsalane kangangoko kukumkani weenjini zokukhangela.
CNjengoko benditshilo ngaphambili, into yokuqala endiyenzayo khetha isihloko izibonelelo zomtya wokukhangela endifuna ukuwubeka. Into yesibini kukulawula i Ukuxinana kwamagama Ukujonga kakhulu inani lamaxesha amagama athile avela kwinqaku. Oko kukuthi, emva kokukhetha isihloko kunye nokubhalwa kwenqaku, ubuninzi bamagama aphambili ahambelana nemitya yokukhangela ikhona. Ekupheleni kweposti ndiyiphinde ndiyifunde kwaye ndigqibe ekubeni kufuneka ndongeze okanye ndisuse into ethile ukuphucula umlinganiso wamagama aphambili. Xa ndicinga ukuba yonke into ilungile ndiyapapasha kwaye ikhona kuphela khangela iinkcukacha ukubona ukuba yeyiphi imitya yokukhangela esebenzayo kunye nendlela yokusebenza kwesicwangciso esisebenzayo.
Syonke into ihambe njengoko bekulindelwe utyelelo lokuqala Abayi kubuya msinya, Kunye nabo kuza kuza izimvo zokuqala Kulapho ke ziqala khona iingxaki. Iphepha leWebhu (Ndithetha iphepha elithile lebhlog, hayi ibhlog yonke) iphelele, yenziwe yinto epapashwe kwinqaku kunye nayo yonke ingcaciso ebonakala kwiikholamu ezisecaleni, i-header kunye ne-footer. Nini Uphando ndwendwela iphepha lakho alifundanga inqaku kwaye litsiye lonke iphepha, kodwa ithathela ingqalelo yonke imitya yokubhaliweyo evela kweli phepha xa usenza isigqibo malunga nokuba liphi na iphepha lakho kwaye liza kukhangelwa njani ngenxa yoko. Kunjalo oku kubandakanya amagqabantshintshi.
LUmntu oshiya amagqabantshintshi kunqabile (okanye angaze) ayakuthathela ingqalelo ukuba unesicwangciso-qhinga esithile sokubeka inqaku apho ephawula khona. Ngamanye amaxesha amagqabantshintshi awayi kuba nanto okanye incinci yokwenza nesihloko ekuxoxwa ngaso kwithuba nasemva kokuba zinxulumene kuphela kwipesenti encinci yamatyala aya kuthi abandakanye naliphi na amagama aphambili ofuna ukuwabeka.
A njengokuba usamkela utyelelo ngakumbi amagqabantshintshi uya kufumana. Intoni UGoogle ufunda iphepha lakho xa lilonke ukwanda kwenani lamagqabaza kuyakwenza Ukuxinana kwamagama aphambili kuhlanjululwe y ukuba awulawuli lo mkhwa kuyakucaca ukuba Undwendwelo olufanayo olufumene enkosi kumatyathanga athile okukhangela aya kuba noxanduva kulawo matyathanga okukhangela aphelelwe ngamandla ndiyeke ukundwendwela. Iphikisana suku?.
Demva kokufunda oku kungasentla, abanye banokucinga ukuba ayisiyonto inomdla ukukhuthaza izimvo kwibhlog kodwa baya kwenza impazamo enkulu. Ukucinga ngolu hlobo kuya kulingana beka indawo phambi kwentlalo yebhlog nakwindawo enqwenela ukukhula le miba mibini kufuneka ilungelelaniswe kwaye ingathobi enye kwenyeIzimvo zibalulekile, zezona zixhobo zibalaseleyo zokunxibelelana nebhlog (ubudlelwane yeyona ndlela yokunyusa iPageRank ngokwendalo) kwaye baphucula ukhetho lwakho Umsila omde (Umgca omde wokusetsha), kodwa ukuba awulawuli, banokwenza ububi ngaphezu kokulungileyo.
EKulungile ukukhuthaza amagqabantshintshi kwibhlog kodwa kuya kufuneka uwafake kwisicwangciso sokubeka indawo. Njengo? Ungandivumela ukuba ndiyishiye kwinqaku elizayo malunga nendlela Tshatisa amagqabantshintshi neendlela zokubeka indawo apho ndiza kunika khona iindlela ezithile indlela yokufumana uninzi kwizimvo ukuze basebenze ngokudibeneyo (kwaye hayi kwicala elichaseneyo) nesicwangciso-qhinga sethu sokubekwa kweinjini yokukhangela. Ndingavuya xa ndifunda iikhomenti zakho. Imibuliso yesidiliya.
Ungaqhubeka nencoko kwibhlog ye TONI1004: Inethi yeMiyane
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Izimvo kunye nesicwangciso sokubeka.
Molo javi, indlela yakho ibonakala iphumelele kakhulu, khange ndibone into efanayo, kwaye kuko konke ukuchaneka okuchazayo, andikukhanyeli nakanye, indishiya nencasa 'kaMacavellian' -ñaca, ñaca-, ukuza kuthi ga ngoku «Ulawulo» - iliso ndilifake ngaphakathi kwiimpawu zokucaphula-umxholo wezimvo ukukunceda ukuba uzimise nazo.
Ndiyacinga ... ndiyacinga ... kuxhomekeka kwinto ethi inqaku iya kuba yile ithi izimvo, ewe, xa sizifumana, kwaye xa sinobuqili bokuzivusa, kwaye sibakhuthaze. Ihagi
UJuan Miguel sitsho
Ndilithande kakhulu inqaku elikwiqhinga lokuma. Kuyinyani ukuba amagqabantshintshi, nangona eyinxalenye ebalulekileyo yebhlog yethu, kwangaxeshanye likrele elintlangothi-mbini. Uyinyani ngokuqinisekileyo ukuba inokusasaza umxholo wenqaku.
Ndizama ukugcina "itshekhi" kwizimvo zam, kodwa amaxesha amaninzi ayinakwenzeka.
Enkosi ngokusinika inqaku ekulula ukuliqonda!
Imibuliso evela emajukujukwini!
Phendula uJuan Miguel
UJoe, le sele iqhubele phambili kakhulu kum, ukuba abathethi gwenxa, ukuba nabo bayaphawula ...
Mmmm ... Ndiyayihlonipha indawo yokuma. Kodwa… asibhaleli ukuba zifundwe? Ozithobileyo. Ingabonakala ingenangqondo kum ukumodareyitha iikhomenti ngokusekwe kumagama abawasebenzisayo. Ndikhetha ukuba wonke umntu ashiye uluvo abacinga ngalo. Kwaye vumela uGoogle acinge into ayifunayo.
Luluvo lwam, kunjalo.
Ngaba uyazi ukuba kwenzeka ntoni? Ekugqibeleni, ezona blogi zityelelweyo zezo zinamagqabantshintshi. Njengezithuba zesiporho.
Kulungile masicacise izinto ezimbalwa ngaphambi kokuba zonakalise:
@ Víctor andivumelani xa usithi "kuxhomekeke kwinto ethi inqaku liya kuba yile ithi izimvo." Ungathetha ngayo nantoni na oyifunayo emva koko ufumane izimvo ezinje ngo "Ndiyithandile", "uthetha ngenye into ...", njl.njl. Ayinanto yakwenza namagama aphambili ozama ukuwabeka. Ayisoloko isenzeka kodwa yinto eqhelekileyo. Umzekelo kwibhlog yakho, evela kwibhlog yeebhlog, kusengqiqweni ukuba izimvo ziyafana kakhulu nomxholo wenqaku kodwa nangona kunjalo, ngaphezulu kwesiqingatha siyakuba loluhlobo "Ndiyithandile" okanye hayi? Oku akukubi kodwa ukuba uzama ukubeka indawo kuya kufuneka uyithathele ingqalelo.
@ iván uyihlelile ngokwakho i-movie, ndithe phi na ukuba ndimodareyithe izimvo? Have Nditshilo ukuba kwinqaku elizayo ndiza kunika ubuchule "bokulungelelanisa izimvo neendlela zokubeka indawo" khange ndithethe ngokumodareyitha okubonisayo. Ndiyavuma ngendawo yesiporho, kodwa eli nqaku lizama kuphela ukutsalela ingqalelo kulo mbandela kwabo bantu banomdla wokuphucula isikhundla sabo. Asinguye wonke umntu onebhlog enjengawe ukuba uyifunde, baninzi abafuna ukwenza imali ngebhlog yabo okanye ngenxa yoko kuthatha amawakawaka otyelelo lwemihla ngemihla. Ngaphandle kwesicwangciso sokuma awuyi kuba nazo.
Ndiyathemba ukuba icacile (ndicinga ukuba ekupheleni kwenqaku liyithetha ngokucacileyo) ukuba NDIKHUMBILE KWEZIMVO, nokuba ziyintoni na. Emva koko kuya kufuneka sijonge indlela yokuqinisekisa ukuba la magqabantshintshi awawi kwisicwangciso sethu sokuma.
Andikaze ndikhethe ukumodareyitha izimvo. Ndiyakholelwa ukuba inqaku lenzelwe abanye ukuba bafunde, hayi igoogle kwisalathiso.
Ewe, ifomula endingenakuyichasa iya kuba kukususwa kwesihloko esingaphandle.
Ngale ndlela, kuphela ngamagqabantshintshi abhekisa kwinqaku elibuzwayo elinokuthi livele, ke iqhinga lokubeka indawo liya kukhuselwa ...
Ngapha koko, kum ukuba ndenze uluvo (ukuba nje ayisiyiyo "molo ndiyayithanda ibhlog yakho uze kum undixelele unjani") ligalelo kwibhlog kwaye ekuphela kwendlela iibhlogi ezinokunxibelelana ngayo ...
Ngaba siya kuzisusa zonke izimvo ezixhalabisayo umzekelo, malunga nempilo yethu xa sigula ukuba sithathe isigqibo sokuyibeka esidlangalaleni, kuba ibangela umsila omde?
Ndivumelana nawe, ndisenezimvo ezimbalwa kodwa ngekhe uzame 'ukugqibelela' ngayo yonke into ubuye umva, kuyanelisa ukufumana izimvo, inyani yokuba abanye bafunda into oyibhalayo yinto entle.
Iviniga, ndibhale ngelixa ubusenza kwaye andifumananga ndifunda uluvo lwakho emva kokuba kupapashwe eyam, ke ndiyakuxelela ukuba icacile. Kodwa ndinombuzo:
Ngaba baninzi abantu abenza imali ngebhlog?
Kuzo zonke iibhlog endizaziyo ukuba babini kuphela abaziyo ukuba bafumana okuthile ... I-Dans kunye neMoya (eyokugqibela yanyamalala kwakudala) ... Kwaye andicingi ukuba ungafumana imali eninzi ngokubhloga ... nangona ndinokuba ndiphosakele.
Ewe ndicinga ukuba ...
Kananjalo ... iwebhusayithi,
kananjalo… izimvo, ukubeka indawo.
PS:! Isicwangciso sokubeka!
Ndiyawuqonda umdla wakho wokwenza "isifundo" sentsimi yonke yokubhloga kwaye ... Kodwa indlela oyinika ukubhloga ayifani nale ndiyenzayo. Ukuba unomdla wokufika kwabantu abatsha ukuba kufuneka utshintshe indlela obhala ngayo, kufuneka unakekele izimvo, iinjini zokukhangela, iiwijethi ... Ukuze uzinikezele ekuhambeni ekubhaleni (yile nto uyathanda) ukuzinyusa ... Ndicinga ukuba ngako konke okwenzayo kukugqwetha ibhlog yakho kunye nezizathu zakho zokubhala.
Ibhlog iyindlela yokwazisa kunye nokuzenzela unxibelelwano ngobuninzi, kwaye mhlawumbi kukho abantu abayithathayo njengomsebenzi kwaye isenokuba yiyo. Kodwa inyani kukuba ibhlog yindlela onokuthi unxibelelane ngayo nabanye kwaye ukuba uleqana nabaphulaphuli kwaye ngenxa yoko ulahlekelwe sisizathu sokuba ubhale kwaye ayifanele. Kwaye nokuba ufuna ntoni ngokwenza oku… Iiblogi zikunika ithuba lokukhetha, ukubhala nokwenza nantoni na eyimfuneko… Ukuba ufuna ukuziphilisa ngoku kufuneka uzithengise: zithengise kwiphephandaba. , naloo nto uyenzayo kwaye uza kufumana ngaphezulu ... Ngale nto andizami ukuthi akukho semthethweni ukuzityebisa ngokwenza into oyithandayo, into endiyithethayo kukuba uyayenza into oyithandayo hayi enye into. Ukuba wenza into oyithandayo kunye neefleyiti zivakala kuwe, kulungile, kodwa into ebalulekileyo kukuba ayivakali into ebalulekileyo lithuba elinikwa ziiblogi ukuba unxibelelane noluntu ngokuthetha ngento oyithandayo.
Ndiyathemba ukuba khange ndibenzima okanye ndigqithe ngaphezulu ... Kodwa ndiyifundile iposti yakho kwaye ukufunda okuninzi kwesi siqhelo kwenza okuhle ukuba iibhlog kufuneka zithathe isihlalo sangasemva kunye nalo lonke ilizwe apho into ebalulekileyo bubungakanani , ukunyusa, abaphulaphuli ... Ukuba konke oku kubonakala kuyinto ebalulekileyo malunga namava okubloga
Okokuqala, molo kwakhona, ndibuyile kwi-Intanethi, kwaye uff kubonakala ngathi ndiphose uninzi lwezithuba.
Ngokoluvo lwam esi sithuba sinezikhundla ezi-2, eyokuqala yeebhlog eziqalayo kwaye okwesibini ezo sele zinenani elincinci lotyelelo, ewe, ndiphakathi kwabokuqala kwaye kufanelekile ukuba ndizazise nangayiphi na indlela. kunokwenzeka.
Kwelinye icala kubonakala kulungile kum kodwa hayi kwelinye.
Ukubulisa iVinegar 😀
Ewe mhlekazi inqaku elilungileyo malunga nokuma licacisiwe ngokucacileyo nangokuvakalayo
Sele ndilindele ukuqhubeka ...
Phendula i forat
Ngamahlwempu uJavi, enye ithetha ngento enye kwaye abafundi bayayiqonda enye.
Akukho mntu uthi bazokumodareyitha izimvo, emva koko abaphengululi abanjengoPrats baphuma becebisa ukuba umntu akufuneki enze ibhlog yemali kwaye ngaphezulu koko kunciphisa uxinano.
Kungenxa yoko le nto kwezinye iiposti ndibeka isilumkiso apho isithi iposti yenzelwe kuphela abo bafuna ukwenza imali kunye nabo bangenayo, kulungile, kunjalo.
Ndicinga ukuba ndicinga ukuba icebo lokubeka indawo lihamba phi nezimvo okanye ubuncinci zenzeka kum ngoku ukuba zinokuphuculwa njani. Mhlawumbi nge-plugin? okanye utshintsho kubasebenzi. Inyani yile yokuba khange ndiyithathele ingqalelo, ndiza kulinda ukuba ndibone ukuba wothuke kangakanani.
@Prats ndiyaluhlonipha uluvo lwakho, kodwa ungaze ungene kwiblogi ekubekeni okanye kwindlela yokwenza imali, ndikholelwe ndibona impendulo yakho ebaxiweyo (gqwetha, thengisa, ..) kwisithuba esingathethi nto, ukuba uya apho Ungayixhathisi kwaye ungathandi. Jonga iiPrats xa ndisenza incwadana yemigaqo yokusebenzisa indlela endiyenza ngayo ukuze inike uninzi lwabantu kwaye oku akufani nephephandaba, okanye imagazini ethengwa nangubani na ofuna, apha, kwiNet ukuze le ncwadana ibonakale kuluntu ngokubanzi, kufuneka kusetyenziswe iindlela ezithile, kubandakanya nokuxinana kwamagama aphambili.Ngaba ucinga ukuba le bhlog iphosakele kuba ndilandela imigaqo kaGoogle ukufikelela kubaphulaphuli abaninzi?
@Kamps Ndingathanda ukuba wabelane nathi ngento engalunganga kuwe, ukuze sikwazi ukuthetha ngayo.
@forat kwaye @ Rogelio wandoyikisa ukupapasha ukuqhubeka, kule andikhange ndithethe nto kwaye kukho abo bangayiqondiyo kwaye ngokulandelayo bandisike….
Imibuliso kubo bonke 😉
Vuyisani Iviniga !!! Qhubeka ubhale indlela othanda kwaye uziva ngayo kuba ukuba ayisiyiyo yonke into egqwethekileyo ... uluvo lwam oluthobekileyo kukuba umntu ngamnye wenza into ayithandayo (ngengqondo eqhelekileyo, ewe) kwaye xa ungathandi into, gxeka ngendlela eyakhayo, ukuba umhlaba awupheli kuba utsho uluvo lwakho malunga nento ethile. Kwimeko yethu, ewe, sifuna ukuba neendwendwe kodwa asizibulali sikhangela iindlela zokwenza oko.
I-Phew yokulawula umxholo wezihlomlo ayinakwenzeka kwaye inyani kukuba yinto esezandleni zamathuba ... Nangona isihloko sinomdla ndicinga ukuba maninzi amathuba okuba amagama aphambili azakuvela kwizimvo.
Inqaku elilunge kakhulu, ungacingi ngokungabhali ukuqhubekeka, nangona elowo kuthi enoluvo lwethu, kuhlala kulungile ukuba nomnye umbono wokuzixhasa kwaye kwimeko yakho ukuba siqinisekile ukuthatha ithuba lokuzilungisa. Ukubulisa.
Enkosi ngenkuthazo abahlobo, ndiyaluhlonipha uluvo lomntu wonke, nditsho nokuchaseneyo, into endicaphukisayo kukuba ungayiqondi into endiyithethayo. Kungenxa yoko le nto namhlanje ndiza kupapasha icandelo lesibini leli nqaku kwaye wonke umntu anike uluvo ngalo. I-blogosphere yile, phawula, vuma uxoxe
Heh heh ... Ubeka isekisi kwaye amancinci akho akhula, iVinegar. Ndicinga ukuba inqaku lakho lilungile. Kwaye ukugxeka yeyona ndlela yokulinganisa ukwamkela oko sikubhalayo.
Ndiyazi ukuba uza kundibulala (ngoku ndiyazi ukuba indawo yesibini yegama lakho lesidlaliso livela phi: D) kodwa, ngaba umntu uyayivula ibhlog ukuze angayifundi? Ndicaphula kumagqabantshintshi akho: "Asinguye wonke umntu onebhlog enjengawe ukuba uyifunde ...". Ngubani owenza amanqaku kuphela ukuze azibeke kwindawo enzulu xa engazinzanga ejolise kubafundi abanokubakho? Ndikhumbula uninzi lokuma. Ngokucacileyo kubalulekile kuba ukuba akukho mntu uya kukufunda. Kwaye ucinga ukuba inaliti enkulu ye-ego, ukutya okuphambili kwempembelelo. Kodwa ngaba ukwanda kotyelelo kubaluleke ngakumbi kunokugcina oluqhelekileyo? Kuyinyani ukuba ngokufaka izikhundla unyusa inani labantu abangena kwiphepha. Kodwa ingakanani ebalekayo kwi-0 eqhelekileyo ngexesha kunye ne-1 kwimbono yephepha?
Hayi !!! Iviniga emehlweni hayi!
Kwi. Ndiza kuvalela.
Hahaha, xa uJavi wathi "ibhlog ukuze bakufunde" Ndicinga ukuba wayethetha ukuba abanye benza ibhlog ngaphandle kwenjongo yokwenza inzuzo, bayithatha njengento yokuzonwabisa okanye eyonwabisayo. Ngelixa abanye betyala ixesha elininzi kunye nomzamo wokubhloga (ukwenza iposti elungileyo ayiveli ndawo) kwaye nangona bayayithanda kwaye bayonwaba, banethemba lokufumana inzuzo ngexesha elityaliwe, ukuze bazinikezele ngokupheleleyo kwibhlog.
Kwaye ukuba unethemba lokuphumelela inani elibalulekileyo kuya kufuneka ubeke endaweni ... Kwaye ukuba awulindelanga nto ungasayi kuqhubeka ubetha iviniga.
UMiguel Angel Gaton sitsho
Ndiyavuma ngenqaku lakho. Kwimeko yam ndinayo icacile:
-Ibhlog yakho: Ndikhuthaza izimvo, ndifuna ukuba abantu bathathe inxaxheba kwaye baxhamle kwigalelo labo ukuphucula kangangoko.
- Iibhlog zeshishini: Ukubeka isikhundla kukumkani. Eyona nto iphambili kukufumana iindwendwe nokuba uluntu lwenziwe okanye hayi. Nangona ndingenza indawo yabasebenzisi abathembekileyo abaphawula ngcono kunangcono.
Phendula uMiguel Angel Gaton
@ iván 🙂 inyani kukuba andichananga xa ndisithi "Asinguye wonke umntu onebhlog enje ngawe ...", URogelio utolike into encinci afuna ukuyithetha kwaye ndabelana ngokupheleleyo noko akutshoyo.
Xa bendisithi "funda" bendithetha ngeeblogi ezipapasha izinto zobuqu ngamabali, amava kunye nee-anecdotes nabathanda ukwabelana ngezinto ezinomdla, amanqaku okujonga, njl. Ngamafutshane, ziibhlog ukuba "zifundwe." Kodwa ke kukho iibhlog zokubonisana, ezifundwayo, kodwa ngendlela eyahlukileyo. Abantu beza kubo bekhangela incwadana yemigaqo okanye banolwazi ngesihloko ukuba bangakonwabeli ukubhala kombhali. Kule meko ulwazi luyasetyenziswa kwaye alufundwanga.
Ndiyakholelwa ukuba uMiguel A. Gatón uze kundisindisa ngokuchaza ngokucacileyo umahluko endifuna ukuwubonisa. Ibhlog yentengiso kufuneka ibeke okanye ayiyi kuba yinto, ibhlog yakho yenye into. Akukho namnye kuni omele azikhabe ezi zimvo kodwa ukuba unomdla wokumiswa kufuneka unike indlela efanelekileyo.
Ngendlela u-Iván ukuba uyavala kulapho kuzakufuneka ndifumane iviniga
@Miguel kuyonwabisa ukukubona apha.
Imibuliso kubo bonke (ngaphandle kwiviniga ndiyigcinele u-Ivan)
Amaxesha amaninzi umntu uyathetha kwaye abanye baneenyawo endaweni yeendlebe ... hehehe
UMiguel A Gatón ubethe isikhonkwane entloko… ngekhe ayibeke ngcono.
Hayi akukho Vinegar ... Ukuba ibhlog yakho imalunga noku ... ukuba ndiyifundile kuba usitsho izinto eziluncedo kakhulu, sk kwimeko yakho ichasene, ibhlog yakho imalunga nokunika iingcebiso kubuchwephesha kwaye: iposti ilungile . Thetha malunga nayo: ingcebiso kwiibhokhwe.
Into endiyithethayo kukuba xa ubhala ukhathalele ngakumbi ukubeka ibhlog yakho kugoogle kunokubhala, ngokuqinisekileyo uya kuba ufumana kuGoogle kodwa ulahlekelwe kukonwabisa ukubhala 😀
Ndicinga ukuba isifundo senziwe ... Ewe, mhlawumbi kubonakala kungenangqondo kodwa sisiphene esindivumeleyo ukuba ndifunde iileta (bendingenje ngaphambili !! XD)
Iviniga elungileyo, ndithanda ukukufunda njani hahaha. Kulungile kumxholo wokulawula amagqabantshintshi (kwaye kwi-chustis asinanto kwaye kuncinci esingayithethi nanye) ndicinga ukuba kunzima kakhulu ukulawula amagama aphambili «abalulekileyo» kufanele ukuba kube nzima kakhulu, kulungile, ndiza kuphawula ngawo xa sise chustis sinamagqabaza ayi-1000 emihla ngemihla hahaha. Ukubulisa ngoku ukuze ungazihluphi izibalo: ukukhangela kweinjini yokukhangela, iviniga yokubulala. hahahaha imibuliso.
Ngokuphikisana okuninzi, andizukuprinta iposti kuphela, kodwa zonke izimvo, ngumthombo owahlukileyo wezikhundla ezahlukileyo ekubekweni okungafane kubonwe ...
Ndigcina uluvo lwam ngenqaku lesibini.
I-hug kunye ne-thnks ye-anchor 😉
Khange ndiyeke ukucinga ukuba amagqabantshintshi angqinisisile ukungena, nangona ndicinga ngesiphumo esichaseneyo, kunokwenzeka ukuba ungenelelo lwangaphakathi lusebenze ngcono ngenxa yezimvo.
Izinto ezinomdla, hayi mhlekazi.
@Prats unyanisile ukuba uyolo lokubhala lulahlekile kodwa xa usenza inyathelo ngenyathelo ngenyathelo akukho lonwabo ubhekisa kulo. Xa ndenza ungeniso olunje andicingi ngokubekwa (ndatsho kwasekuqaleni) ndizama nje ukubhala konke okusemandleni am kwaye ndiyakonwabela ukukwenza. Ezi zinto zimbini azihambelani kodwa nganye inexesha layo. Andazi ukuba iya kuba yinto yokuvela kwisayensi 😉
@canutrelax kwinqaku elihambelana nale, uyabona ukuba awunyanzelekanga ukuba ulawule izimvo. Ngendlela, enkosi kakhulu ngokundinceda ngokuxinana kwamagama aphambili
@Mariano icandelo lesibini sele lipapashiwe ndilinde uluvo lwakho.
@Bender ubethile isikhonkwane entloko, ungeniso "oluphakathi" kufuneka londliwe nguMsila omde kodwa apha kufuneka usebenzise iindlela zokusebenzisa eli thuba. Izimvo sisixhobo esifanelekileyo soku.
Enkosi kakhulu nonke ngokukhuthaza ingxoxo. Imibuliso yeVinegary.
Isithuba esihle kakhulu ngamanye amaxesha ubulala intloko yakho ucinga ukuba ndifumana njani ukutyelelwa ngakumbi kwaye ndifumana njani izimvo ezingakumbi kwaye ndingahoyi eminye imiba ebalulekileyo, kakuhle kwaye ngethemba lokwandisa isihloko
Lawula amagqabantshintshi akho kwindawo engcono